संघिय संसद सचिवालयकाे महासचिवमा डा. भरतराज गौतम नियुक्त - Kantipath.com
संघिय संसद सचिवालयकाे महासचिवमा डा. भरतराज गौतम नियुक्त
संघिय संसद सचिवालयकाे महासचिवमा डा. भरतराज गौतम नियुक्त भएका छन्। प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको संयुक्त सिफारिस अनुसार नेपालको संविधानको धारा १०६ बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले गौतमलाई महासचिव नियुक्त गरेकी हुन्।
उनलाई सोमबार नै सिफारिस गरिएको थियो। संघीय संसदमै सचिवका रुपमा कार्यरत गौतमलाई नेकपाभित्रको पूर्वएमाले खेमाको जोड बलमा महाचिव नियुक्त गरिएको हो। उनी २०५१ सालमा संसदमै शाखा अधिकृतका रुपमा सेवा प्रवेश गरेका थिए।
संसदको इतिहासमा कर्मचारीबाटै महासचिव पदमा नियुक्त हुने गौतम दोस्रो व्यक्ति बनेका छन्। यसअघि गत चैत पहिलो हप्तासम्म संसद सेवाकै मनोहरप्रसाद भट्टराई दुई कार्यकाल महासचिव भएका थिए। पूर्वमाओवादी खेमाबाट सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटा गौतमको पक्षमा नरहे पनि पछिल्लो समय बढेको दबाबका कारण उनी गौतमको पक्षमा उभिन बध्य भएका हुन्।
पूर्वएमाले पक्षले विरोध गर्दागर्दै सापकोटाले गत चैत पहिलो हप्ता प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिएका थिए। संसदको महासचिव बन्न बाहिरबाट पनि चर्को लविङ भइरहेका बेला सभामुख र अध्यक्ष संसद भित्रकै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका हुन्। संसदको महासचिव नेपाल सरकारको मुख्य सचिव सो सरहको वरियतामा रहने कानुनी व्यवस्था छ।
Previous Previous post: तारे होटल बन्द गर्ने निर्णयप्रति सरकारको आपत्ति, संघको ध्यानाकर्षण
Next Next post: यसकारण ओलीको ‘अध्यक्ष’ पद प्रचण्डको हातमा